अन्तरमनका कुनाबाट नारीत्वको आभास अनि समाजको नारीवादी यथार्थता
“नारी पुरुष सरोवरी सधैभरी वरोवरी”
सिता पौडेल (अर्चना)
आज अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस । हरेक वर्ष मार्च ८ तारिकका दिनलाई अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसका रुपमा मनाइदै आएको पाइन्छ । यो दिवस महिला जगरुकताको दिवस पनि हो भनेर विज्ञहरुले भन्ने गरेको पनि सुन्न पाउँछौ ।
सृष्टि संरचनाको वलियो आधार अनि समाज निर्माणको आधार स्तम्भ नारी शक्ति समाजको एक अपरिहार्य शक्ति हो । आमा दिदी ,बहिनी , भाउजु , बुहारी ,श्रीमति , अनि मायालु वा प्रमिका यी सबै नारी पात्र हुन् । जसले संसारको आधा आकास ढाकेका छन् र पुरुषको अस्तित्वलाई पूर्ण बनाएका छन् । तसर्थ पनि आज नारीहरुको सम्मान र व्यक्तित्वको कदर गदै विभिन्न कार्यक्रम गरि विश्वभर नारी दिवस मनाउने गरिन्छ ।
नारी दिवसको सन्दर्भ पारेर केही दिन अगाडीदेखी नै बढीजसो शहर केन्द्रित कार्यक्रमहरु पनि भएका छन्। घर परिवारको व्यवस्थापन देखि सामाजिक आर्थिक लगायत विकासका धेरै आयामहरुमा नारीहरुको सक्रिय सहभागितार नेतृव्वको क्षमताको प्रसंसा गदै यस अवसरमा कार्यक्रम पनि गरेको देखिन्छ ।
यस वर्षको अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसमा विभिन्न नारी केन्द्रित संघसंस्था तथा सामाजिक अभियान्ताहरुले “परिवर्तनका लागी खरो भएर उत्रिऔं, अनि अझ समावेशी र लैङ्गिक समानता सहितको कार्य वातावरणका लागी ” भनेर मनाउने पैरवी समेत गदैं आएका छन्। तर धेरै कार्यक्रमहरु केवल कार्यक्रमा मात्र सिमीत छन् भन्ने गुनासो पनि यत्रतत्र सुन्नमा आउँछ ।र यथाथमा पनि यसै भएको पाइन्छ । हाम्रो नेपाली समाजको र्पैतृक तथा लैङ्गिक संरचना र कमजोर मानसिक प्रावधानका कारण समाजमा दैनिक जसो आज पनि महिला हिंसा भएकै छन् भने भेदेभावको अवस्थाले पनि पुर्णरुपमा काँचुली फेर्न पाएकै छैन। अझै पनि समाजमा व्याप्त अतिवादी संकिर्ण चिन्तनबाट हाम्रो समाज मुक्त हुन सकेको छैन।
आजको २१ औं शताब्दिको अत्याधुनिक युगमा पनि महिला निरिह कुटिन्छन्, पराइको त के कुरा आफ्नै आपन्तबाट नारीाहरु बलात्कृत हुन्छन्, हरेक निर्मला पन्त जस्ता धेरै निर्मला बालीकाहरु बलतकृत भएर मारिएकोको सुन्दा र जोकोहीको मुटु भक्कानिएर आउँछ । आज पनि बोक्सीको आरोपमा एउटी नारीलाई मानव मलमुत्र खुवाइन्छ , अपमान गरिन्छ । छाउडिका नाममा भोग्नु परेका कष्टको त के बयान कति नारीहरुले मृत्युवरण समेत गर्न परेको छ । महिला हिंसा , भेदभाव । महिला वेचविखन , घरेलु हिंसा , सामाजिक हिंसा आदिका कारण नारी अझै दिनहीन अवस्थामै गुज्रीएका छन् । नारी स्वतन्त्रता र समानताका जतिसुकै चर्का आवाज उठेतापनि व्यवहारमा पूर्णतया कहीं कतै लागू भएकै छैन।
नारी अधिकार र कानुनहरु कागजमा जति सुनौला अक्षरमा सजिएका छन् त्यति सुन्दर हुनेगरि व्यवहारमा देख्न पाए कस्तो हुने थियो होला भन्ने आज पनि हरेक असल मानिसको मनमा खडकिएको छ। ऋाज पनि नारीले आफ्नो हक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत गर्न पाइरहेएका छैनन् । नारी जाती अझै पनि कम्जोर अवश्थामा गुज्रीएका छन्। अझै पनि ग्रामिण क्षेत्रका र श्रमिक पहिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । समानत र अस्तित्वको अधिकार टाढैको विषय बनेको छ । सुधारको सकारात्मक गति भएतापनि कछुवाको गति छ । अझै पनि सामाजिक , सांस्कृतिक विभेदमा आधारित हानिकारक परम्पराले जरो गाडेको र यसलाई मल जल गर्ने काममा पितृसत्तात्मक र पुरुषवादी मानसिकताले सहयोग गरेको छ ।
तर सबैले आ—आफूले छातीमा हात राखेर आफैलाई सोधौ के म साँच्चिकै नारी पात्रमाथी न्याय गरेको छू ? के हामी नारी नारी विचमा पनि एकता छ ? के हामीले आफ्रनो अधिकार खोजीरहँदा आफ्नो सिप र निर्णय क्षमतालाइ पनि बढाउन कोशिस गरेका छौ ।
के राज्यका माथिल्ला तहमा पुगेका महिलाहरुले नारी पात्रको उत्थानका लागी वास्ता गरेका छौ? के एउटी आमा र वुवाले छोरीलाइ छोटो लुगा नलगाउ भनिरहँदा छोरालाई हिंसा नगर्न सिकाएका छाौ ? के नारी समानता र नारी अस्तित्व बारे साँच्किै बोध गरेर व्यवहारमा लागू गर्न कोसिस हामीबाट भएको छ ? के आर्थिक सामाजिक समृद्धिको लागी महिलाको सकृय सहभगीता अति आवश्यक छ साथै मनुस्य जाती को जीवन सभ्यता र संस्कृतिको हितको लागी पनि महिलालाइ सवल सक्षम र शसक्त बनाउन अवसर दिनु पर्छ भन्ने कुरमा राज्यले गम्भीर भएर सोचेको छ त ? यी विविध प्रश्न लाइ महिला पुरुष सबैले गम्भीर भएर सोच्ने नारी अस्तित्वलाइ बुझ्ने र व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने असल राष्ट्रका असल नागरिक भइ हामी सबै धन्य हुने थयौं कि !